Qadar oo shaaca ka qaaday siyaasaddeeda fog ee ku aadan dalka Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Qadar oo shaaca ka qaaday siyaasaddeeda fog ee ku aadan dalka Soomaaliya
Qadar oo shaaca ka qaaday siyaasaddeeda fog ee ku aadan dalka Soomaaliya
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Qadar ayaa shaaca ka qaaday in muddo kooban gudaheeda ay kaalin weyn uga qaadan doonto nabadeynta Somalia iyo in dib loo fadhiisiyo Siyaasada Somalia.
Wasiirka Arimaha dibada Qadar Sheikh Mohamed Bin Abdulrahman Al-thani oo arrintan ku dhawaaqay ayaa sheegay in fulinteeda ay hirgalin doonaan ka hor inta dowlada hadda jirta aysan afar sano jirsan.
Al-thani, waxa uu sheegay in Qadar ay Siyaasad fog ka leedahay Somalia, sidaa aawgeed ay ku khasban yihiin inay dadajiyan baahiyaha ay Somalia u qabto Amniga iyo Siyaasad fadhisa.
Dadka Sooamaaliyeed ayuu sheegay inay yihiin kuwo aad ugu nugul Nabadda iyo wada noolaanshaha, balse waxa uu carab dhabay inay jiraan dhinacyo aan ku qanacsaneyn degnaanshaha Somalia.
“Qadar si naba ugama gaabin doonto is garabtaaga Somalia waayo waxaa na dhiiri galineysa in Soomaalidu ay u nugul yihiin nabadda iyo wax wada qabsiga”
Waxa uu Al-thani sheegay in Somalia ay saldhig u noqon doonto dowladaha carbeed isagoo sababta ku sheegay in muddo kooban ay ku jartay talaabo dheer taasina waxa uu ku micneeyay halka ay Somalia saldhigan doonto.
“Rajada aan Somalia ka qabno waa mid fog waxaanu aad u rajeyneynaa in saldhig ay u noqoto wadamada muslimka ah, waayo adduunka waxa uu isha ku hayaa Somalia oo kasii boganeyso burburka”
Al-thani oo qeyb ka ah Shirka 73-aad ee Qaramada Midoobay ee ka socda Magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in madaxda dowladaha qaniga ah uu kala hadli doono arrimaha Somalia isagoo ballanqaaday in ay xooga saari doonaan sidii looga qeybqaadan lahaa is garabtaaga dowlada Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, dowlada Qadar oo dano Siyaasadeed ku qabta Somalia ayaa dooneysa in dowladaha carbeed ee Khaliijka ay ka xigsato Somalia oo dhawaan kaga hiilisay Imaaraadka.